Tuesday, 07.30.2019, 12:38pm (GMT5.5)
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै आफ्नै निवासमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीका लागि राखिएका दर्जनौं महंगा गाडी बेचेर राज्यकोषमा दाखिला गर्ने, सल्लाहकार टोली सानो बनाउने इमरानको निर्णयले विश्व नै चकित बनेको थियो । इमरान भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । दुईजना पुर्व प्रधानमन्त्री र एकजना राष्ट्रपति जेलको हावा खाँदैछन् । इमरानले अरुको पनि पालो आउँदैछ भन्दै राष्ट्रबाट लुटको सम्पत्ति फिर्ता गर्न भनिरहेका छन् । इमरानले यी सबै भाषणमा मात्रै बोलेका हैनन् काम नै गरेर देखाएका छन् । देशका ८० लाख बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित मुलुकका प्रधानमन्त्रीले विलासी जीवन बिताउनु हुँदैन भन्दै उनले जुन कदम चालेका छन् त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकका राजनीतिक नेताका लागि ठूलो पाठ हो ।
इमरानले हालै अमेरिका भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । अमेरिकामा रहँदा उनी महंगो होटलमा नबसी पाकिस्तानी राजदूतको निवासमा बसे । यति मात्र हैन सामान्य खर्चमा भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । उनको भ्रमण कुनै चार्टर विमानबाट भएको थिएन । कतार एअरको बिजनेस क्लासमा सामान्य यात्रुसरह अमेरिका गए अनि भ्रमणमा परिवारको एकजना पनि सदस्य थिएन न त कुनै नेता वा मन्त्रीका सन्तान नै थिए ।
आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले तीन दिन अमेरिका भ्रमण गर्दा जम्मा ९५ लाख पाकिस्तानी (६० लाख नेपाली रुपैयाँ) मात्र खर्च गर्नु नै इमरानको इमान र देशभक्तिको परिचय बनेको छ । यसअघि अहिले जेलमा रहेका पाकिस्तानी पुर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले एकपटक अमेरिका जाँदा त्यो बेला उहाँले झण्डै ४ करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
मुलुक बनाउन नेतामा दृढता चाहिन्छ भन्ने दृष्टान्त इमरानले दिएका छन् । उनको योजना स्पष्ट छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ र यसका लागि सरकार हमेसा चिन्तित रहनुपर्छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर पदमा पुगेकाहरु आफ्नै सुखसयलमा मात्र बस्दा त्यो देश दिन प्रतिदिन कंगाल मात्रै हुँदैजान्छ भन्ने बुझेका इमरानले पाकिस्तानलाई जसरी नयाँ गोरेटोमा डोर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् त्यो नै हाम्रा लागि अनुकरणीय छ ।
इमरानको स्पष्ट दृष्टिको छ– विदेशी सहायता चाहिन्छ तर उनीहरुले भनेको क्षेत्रमा हैन आफ्नो आवश्यकता अनुसार । अमेरिका भ्रमणका क्रममा उनले पत्रकारहरुसमक्ष यही कुरा बताए । “हाम्रो आवश्यकता हामीलाई थाहा छ सहयोग गर्न चाहनेलाई हैन । उनीहरुले भनेको क्षेत्रमा सहयोग लिएर मुलुकलाई पराधीन बनाउन म चाहन्न । मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाइराख्ने हो भने लगानी भित्र्याउनुपर्छ, अनुदान हैन । अनुदानले सधैं परनिर्भर बनाइरहन्छ ।”
इमरान आर्थिक रुपमा आफैं सक्षम छन् । विश्वका क्रिकेट खेलाडीहरुका ‘आइडल’ व्यक्तित्व उनी क्रिकेट जीवनमै सामाजिक कार्यमा सक्रिय थिए । उनले आफ्नी आमाको नाममा क्यान्सर अस्पताल बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा कुल दश करोड ८० लाख बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । त्यस्तै उनीसंग व्यक्तिगत कार छैन ।
इमरान पाकिस्तानभित्र मात्र नभई बाहिर पनि लोकप्रिय छन् । उनी सादगी जीवनयापनको अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सादगीपनबाट आफू प्रभावित भएको एकपटक बताएका थिए ।
गत जेठमा उनले मुलुकको आथिृक अवस्थाको चित्रण गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी देश चलाउन पैसा नभएको र पाकिस्तानलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन र गरिब जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन प्रत्येक नागरिकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै उनले पाकिस्तानका सबै नागरिकलाई जुन ३० तारिखसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै कालो धन पत्ता लगाएसरकारले जफत गरी आर्थिक अवस्था सुधारमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । इमरानले चेतावनी दिंदै भनेका थिए “हामीसँग कसको सम्पत्ति विदेशमा छ । कसको नक्कली वैंक खातामा पैसा छ, सबै सूचना छ । त्यसैले सबै गम्भीर बनौं ।”
हुन पनि पछिल्लो १० वर्षमा पाकिस्तानको ऋण ६ हजार अर्बबाट ३० हजार अर्ब रुपयाँ पुगेको छ । इमरानले देशबासीलाई राष्ट्रप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै भनेका थिए– पाकिस्तानले चार हजार अर्बको वार्षिक कर उठाउँछ, त्यसको आधा रकम ऋणको किस्ता तिर्नमा जान्छ । बाँकी पैसा जुन बच्छ त्यसले देशको खर्च चल्न सक्दैन । विश्वमा कम कर तिर्ने नागरिकहरुमा पाकिस्तानी पर्दछन् । तर यहाँकै नागरिक सबैभन्दा बढी ऋणको बोझमा छन् । यदी हामी तयार भयौं भने प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० हजार अर्ब रुपया जम्मा गर्नसक्छौं ।
इमरानले भाषण मात्र गरिरहेका छैनन् काम पनि गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको अवस्थामा सुधार गरेर आतंकवाद उन्मूलन, बालिका शिक्षा र स्वास्थ्य अनि समृद्ध पाकिस्तानको मार्ग तय गर्ने सपना उनको कार्यकालको प्रमुख लक्ष्य देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकहरुको प्रयोगको थलो बनेको पाकिस्तानलाई इमरानले स्वाधीन राष्ट्रको दर्जा दिलाउने प्रण गरेका छन् । अमेरिका पुगेरै पनि उनले यस्तै संकेत गरे । नाजायज कुरामा दवाव स्वीकार्न सकिन्न । मानवीय सहायता बेग्लै हो तर दवावमूलक सहायता र हाम्रो प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रको सहयोग चाहिँदैन ।
इमरान खानले गरेका यी काम सामान्य हुन् हरेक शासकले गर्नैपर्ने काम हो । तर नेपालमा किन यस्तो भैरहेको छैन । भाषण एकथरि– व्यवहार अर्कोथरि किन ? नेपालको स्थिति पाकिस्तानकोभन्दा भिन्न छ । पाकिस्तान आतंकवादको चपेटामा छ । यहाँ शान्ति सुरक्षा वहाल छ । दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारमा रहनेहरु किन मितव्ययी हुन सक्दैनन् । किन विदेशीको नाजायज माग पूरा गर्छन् ? किन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन ? यी र यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नकै लागि मुलुकले इमरान खान खोजेको हो ?